Kooxda Manchester City oo laga soo aqbalay dalabkii ay ka gudbisay Nathan Ake… (Goorma ayaa heshiiskan la dhammaystiri doonaa?) – Gool FM
Kooxda Manchester City oo laga soo aqbalay dalabkii ay ka gudbisay Nathan Ake… (Goorma ayaa heshiiskan la dhammaystiri doonaa?)
Haaruun July 30, 2020
(Manchester) 30 Luulyo 2020. Kooxda kubadda kubadda cagta Manchester City ayaa war wanaagsan u soo yeeray, iyadoo laga soo qablay dalabkii ay ka gudbiyeen daafaca Bournemouth ee Nathan Ake.
Naadiga Sky Blue ayaa laga soo aqbalay dalab ku kacayey 41 milyan oo gini oo ay ka gudbisay daafaca kooxda Bournemouth ee Nathan Ake, waxaana la filayaa in maalmaha soo aaddan la dhammaystiro heshiiskan.
Bournemouth ayaa soo aqbashay dalabka ay daafacan dhexe ee Nathan Ake ka soo gudbisay kooxda kaalinta labaad ka gashay horyaalka Premier League ee Manchester City.
Xiddiga reer Holland ayaa haatan qarka u saaran inuu wadahadallo shaqsi ah la galo kooxda ka dhisan garoonka Etihad, iyadoo la filayo in heshiiskan la soo gabagabeeyo maalmaha yar ee soo socda, isla markaana uu daafacan u wareego dhinaca Manchester City.
Magacee ayay Sergio Ramos iyo Pilar Rubio u bixiyeen Wiilkooda Afaraad ee dhowaan Adduunka ku soo biiray?
CIID WANAAGSAN: Gool FM oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyaynaysa munaasibadda Ciidul Adxaa